आसन्न बिम्स्टेक सम्मेलन र छलफल हुनुपर्ने मुद्दाहरु
विचार | 2018-08-27 11:42:00 |
दक्षिण एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकहरुलाई प्राविधिक तथा आर्थिक साहयता प्रदान गर्ने अभिप्रायले स्थापना भएको क्षेत्रीय संगठन बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन यही भदौ १४–१५ गते नेपालमा हुँदैैछ । सम्मेलनलाई सफल बनाउन नेपालमा युद्धस्तरमा तयारीका काम भइरहेको र ८० प्रतिशत जसो तयारीको काम सक्किएको पनि समाचारहरु आइरहेका छन् । परराष्ट मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलनमा भुटानबाट प्रधानन्यायधिश, भारत, बङलगादेश र थाइल्याण्डबाट प्रधानमन्त्री, म्यान्मार र श्रीलङकाबाट राष्ट्रपती तहबाट सम्मेलनमा सहभागी हुने भएका छन् ।
वास्तबमै केही दशक अघिसम्म अति गरिव महादेशको रुपमा युरोप तथा अमेरिकी देशहरुबाट हेपिएको तर, पछिल्लो दुइ दशकयता देखि विश्वको नै ध्यान आर्कषित गर्नेगरी आर्थिक प्रगतिको खुडकिलो उक्लीरहेको एसियाका देशहरुको बिम्स्टेक सम्मेलनले विश्व अर्थराजनीतिमा नै खास अर्थ राख्छ । खासगरी हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले त सार्क, साफ्टा र बिम्स्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरुको माध्यमबाट विश्वमा नै शक्ति आर्जन गरिरहेको छ । सँगसँगै हाम्रो जस्तो भुगोल र गरिव अर्थतन्त्र भएको देशको पनि विश्वमा प्रभुत्व कायम गराउन तथा प्रभाव बढाउन बिम्स्टेक लगायत संगठन प्रभावकारी सावित हुदै आएको छ ।
के छन् बिम्स्टेकका उदेश्य ?
व्यापार, लगानी, उद्योग, प्रविधि, जनशक्ति विकास, पर्यटन, उर्जा तथा यातायात क्षेत्रमा संगठीत सदस्य मुलुकहरुबीच सहयोग आदान प्रदान गर्ने बिम्स्टेकका मुलभुत उदेश्यहरु हुन् । त्यस आलवा आपसी समानता तथा साझेदारीको आधारमा संयुक्त प्रयासद्धारा यस उपक्षेत्रमा सामाजिक प्रगती र आर्थिक उन्नतीलाई बढावा दिने यसका संगठनको अर्को महत्वपूर्ण उदेश्य हो । त्यसैगरी आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक र वैज्ञानीक क्षेत्रका समान हीतका विषयमा सक्रिय सहकार्य र आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने संगठनको उदेश्य छ । यीनै मुलभुत उदेश्यहरुको पेरिफेरीमा रहेर २२ बर्ष देखि काम गर्दै आएको बिम्स्टेक संगठनको चौथो सम्मेलन नेपालमा हुदै गरेको परिपेक्षमा नेपालले आफनो हित अनुकुलको मुद्धाहरुमा छफलल गरी टुङगोमा पुग्नु अपरिहार्य छ ।
बिम्स्टेकको कार्यहरु के हुन् ?
सदस्य राष्ट्रहरुले आयोजना गर्न चाहेमा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग तथा समस्याका विषयहरुमा छलफल गराइने गरि बिम्स्टेकको सम्मेलनहरु गर्नु प्रमुख कार्य हो । त्यसैगरी बार्षिक रुपमा हरेक मुलुकहरुले वर्णानुक्रम अनुसार पालैपालो बिम्स्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठकहरु गरिन्छन् । आवश्यकता अनुसार सदस्य राष्टहरुको वाणिज्य सचिवहरु सहभागी भइ बिम्स्टेक अन्र्तगत स्वतन्त्र व्यापार सम्बन्धि सम्झौताहरु गरिन्छन् । त्यसैगरी बिम्स्टेक एउटा आर्थिक मञ्च भएकोले यसमा सरकारी तथा नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु जम्मा भएर द्धिपक्षीय तथा बहुपक्षीय ब्यापार लगानी तथा प्रविधि सहयोगका सम्बन्धमा छलफलहरु हुने गर्दछन् । जसका निर्णयहरु बिम्स्टेकका मन्त्रीस्तरीय बैठकहरुमा पेश हुन्छन् ।
त्यसैगरी सदस्य राष्टका राजदुतहरु सहभागी हुने बैंककमा मात्र बिम्स्टेकको कार्य समुह बैठक बस्छन् । त्यस कार्य समुहले मन्त्रीस्तरी निर्णयहरु कार्यन्वयन गर्न तथा गराउन गरिएका कार्यहरुको अनुगमन गर्ने गर्दछ । एवंरितले बिम्स्टेकले कार्य गर्ने गर्दछन् ।
नेपालमा हुदै गरेको आसन्न सम्मेलनको एजेण्डा के ?
यही भाद्र १४ गतबाटे नेपालमा सुरु हुने बिम्स्टेक सम्मेलनमा नेपालले प्रभावकारी मुद्धाहरुबाट उठान गरी छलफल गराउनु र निर्णयहरुमा पुग्नु जरुरी छ । खासगरी सार्क तथा साफ्टा जस्ता पुराना र अन्र्तराष्टिय जगतमा पनि ख्याती कमाएका संगठनका कामहरु सन्तोजनक हुन नसकेको परिपेक्षमा पछिल्लो यस संगठनको लक्ष्य उदेश्य हासिल हुने गरी काम गर्नु आवश्यकता देखिन्छ । सार्क तथा साफ्टा जस्ता संगठनहरुका निर्णयहरु कागजमा मात्रै सिमित भइ ती संगठनहरुको शिखर सम्मेलन शिर्ष नेतृत्वको पिकनिक स्पट जस्तो मात्रै हुने गरेको आलोचनाहरु हुन्छन् । बिम्स्टेक सहित यदी ती तीन ओटै संगठनहरुले प्रभावकारी काम गरेका र त्यसबाट नेपालले लाभ उठाउन सकेको भए नेपालको यस खालको आर्थिक दुरावस्था पक्कै हुने थिएन । अहिले नेपाल प्रविधिको विकास र नवप्रबद्र्धनको क्षेत्रमा विश्वमा १०८ औ स्थानमा छ । जवकी आजको विश्वमा आर्थिक विकास र सम्बृद्धिको मुख्य कारण विज्ञान तथा प्रविधिमा हुने विकास हुदै आएको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अमेरिका, चीन, जापान तथा युरोपका मुलुकहरुलाई लिन सकिन्छ । ती देशहरुले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा प्रगती गरेकै कारण आर्थिक रुपमा छलाङ मारेको कहँी कतै छिपेको छैन । अहिले नेपालको ब्यापार घाटा बजेटको सिलिङ नजिक अर्थात बार्षिक ९ खर्ब भन्दा बढी रहेको छ । सार्क, साफ्टा वा बिम्स्टेक लगायतका संगठनहरुको लक्ष्य उदेश्य कार्यन्वयन भएको र त्यसबाट लाभ उठाउन सकेको भए नेपालको ब्यापार घाटा त्यो विध्न अवश्य हुने थिएन । त्यसैगरी दक्ष जनशक्तिहरुको निर्माणमा भुमिका तथा सहयोग आदान प्रदान गर्ने बिम्स्टेकको अर्को मुलभुत उदेश्य हो । तर, नेपाल अदक्ष्य नै अदक्ष्य जनशक्तिको भण्डार भएको छ । जसकारण विदेशमा कार्यरत ५० लाख भन्दा बढी नेपालीहरुले जनङसख्या र लगानी गरेको श्रमको अनुपातमा रेमिटयान्स् भित्र्याउन सकेको छैन । अदक्ष्य तथा अर्धदक्ष्य कामदारको विदेश गमनले उचित रेमिटयान्स् भित्र्याउन सकिएको छैन । बिडम्बना मुलुक भने पुरै रेमिटयान्स्मुखी हुँदैै गएको देखिन्छ । कुनै कारण नेपाली कामदारहरु बढी जसो विदेश जाने गरेको मलेसिया, कतार, दुबइ लगायत खाडी मुलुकहरुले आफना नीति परिवर्तन गर्ने अथवा विदेशी कामदार नलैजाने वा पुग्यो भनेको खण्डमा नेपाली अर्थतन्त्र खत्रक्कै पर्ने खतरा छ । त्यसकारण नेपाली युवा जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन बिम्स्टेकका सदस्य राष्टहरुको सहयोग पाउने गरी छलफल अघि बढाउन आवश्यक छ । ब्यापार घाटा कसरी कम गराउन सकिन्छ ? भन्ने सवालमा नेपालले कुरा उठाउन जरुरी छ । सदस्य राष्टहरुको आर्थिक विकास र सम्बृद्धि बिम्स्टेकको मुल उदेश्य भएपनि पछिल्ला बर्षहरुमा नेपाल बाहेकका बिम्स्टेकका सबै देशहरुको आर्थिक विकास र सम्बृद्धि अघि बढिरहेका देखिन्छन् । तर नेपालको दुरावस्था छ । कसरी नेपालको ब्यापार घाटा घटाउने, कसरी नेपालको गरिवी निवारण गर्ने, कसरी गफाडी भन्दा सिपमुलक शैक्षिक विकास गराउने भन्ने विषयमा जोडदार छलफल गराउँन आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी उर्जा क्षेत्र नेपालको सम्बृद्धिको प्रमुख आधार हो । बिम्स्टेकको उदेश्य अनुरुप नेपालको उर्जा क्षेत्रमा सदस्य राष्टहरुबाट लगानी भित्राउन माग गर्नुपर्ने अर्को महत्वपुर्ण आवश्यकता छ । उर्जा क्षेत्रमा हुने विकासबाट मात्रै नेपालको आर्थिक बिकास एवं सम्बृद्धि सम्भव हुने भएकोले पनि यस बिषय छलफलमा लानु पर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी नेपालले हालका बर्षहरुमा बिम्स्टेक राष्ट्रहरुबाट आयात मात्र गरिरहेको छ । निर्यातको अंश ज्यादै कम छ । त्यसकारण ती मुलुकहरुमा नेपाली उत्पादनहरु निर्यात गर्न के के कामहरु अथवा के के सुबिधाहरु पाउनु पर्ने हो त्यसलाई यस सम्मेलनमा छलफलको बिषय बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसपछी मात्र अहिले समाचारमा आए जस्तो आतङकबाद, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपत्ति लगायतका अन्य क्षेत्रहरुको मुद्दाका विषयहरु उठान गरिनु आवश्यकता छ ।
समग्रमा भन्दा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरु भएर नयाँ संघीय सरकार बनेको र त्यो कार्यान्वयन हुदै गरेको परिपेक्षमा आर्थिक विकास र सम्बृद्धिको लक्ष्य जो सरकारले लिएको छ । त्यसलाई परिपुर्ती गर्न बिम्स्टिेकको चौथो शिखर सम्मेलन नेपालमा हुनु एउटा दरिलो अवसर हुन सक्छ । तर नेपाल सरकारले सम्मेलनमा गरिव तथा आर्थिक रुपमा पछि परेको देशको हैसियतमा आफु अनुकुल मुद्दा र विषयहरु उठान गरी छलफल गराउनु अत्यन्त आवश्यक छ । त्यस अनुरुप निर्णयहरु गरिनु आवश्यक छ । गौतम बिजनेसपाटी डटकमका सम्पादक हुन्
कसरी घरमा बस्ने ?
अरुणराज सुमार्गी काठमाडौं । घर आफ्नै हो, कोठा आफ्नै हो, सब आफ्नै हो । अनि किन हामी भित्र बस्दा...
कोरोना भाइरसको सन्त्रास
मुरारी ढुंगेल, भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा कहिले हिमपात, कहिले बैंकमा लुटपाट त कहिले...
ललितपुर, माघ १० । महालक्ष्मी नगरपालिका १ ईमाडोल डेरा गरी बस्ने झापा पृथ्वीनगर घर भएका २५...
बीएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
काठमाडौँ । बीएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।...
सार्थक बनाऔं– नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०
–मुरारी ढुंगेल, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सुरु भएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूले...
सुमार्गीको रकम फुकुवा र रोक्काको नाटक , अनि देशको आर्थिक समृद्धि
शिव अधिकारी काठमाडौं– यो देश धेरै खाले अनौठा घटना घटिरहने भट्टी बनेको छ । चारैतिर यस्ता...
योगी नरहरिनाथको सालिक र सुमार्गीको पाठशाला: डा. गोविन्दशरण उपाध्याय
हेटौंडा पुस, २१– अहिलेको सरकारले राष्ट्रसन्तको विराट योगदानको कदर गर्नेछ भन्ने कुरामा...
जातीय भेदवाव र समाज विकास
काठमाडौं– प्रत्येक नेपालीको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई नेपाली...
शाही चिकित्सकको नजरमा दरबार
काठमाडौं असार, ११– डा. खगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठका जीवनका बहुआयाम छन् । डा. श्रेष्ठको पेशा...